कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) विरुद्धको खोप ल्याउन नेपाल सरकारले खोप उत्पादन गरिरहेका देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ । परीक्षण सफल हुने सम्भावना बढेपछि सरकारले नेपाललाई पनि खोप आवश्यक पर्ने भएकाले कूटनीतिक नोट पठाएको हो ।
‘नेपाललाई पनि खोप आवश्यक पर्छ । त्यसैले खोप उत्पादन गरिरहेका देशहरूमा सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको छ’, स्वास्थ्य सेवा विभागका खोप महाशाखा प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमले भने, ‘सहयोगको अपेक्षासहति नोट पठाइएको हो ।’
अमेरिकाका दुईवटा औषधि निर्माण कम्पनी, भारत, चीन, रुस, ब्राजिललगायत देशमा भ्याक्सिन निर्माणको काम भइरहेको छ । ११ वटा भ्याक्सिन तेस्रो चरणमा पुगेको र तीमध्ये तीनवटा भ्याक्सिनको प्रभावकारिता ९० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको दाबी गरिएको छ ।
अमेरिकी कम्पनी फाइजरले जर्मन बायोएनटेकसँग मिलेर बनाएको भ्याक्सिन, अमेरिकी कम्पनी मोडेर्ना र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले एक्ट्राजेनेकासँग मिलेर बनाएको भ्याक्सिनको प्रभावकारिता बढी देखिएको छ ।
बेलायतमा मंगलबारदेखि कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको छ । अमेरिकी कम्पनी फाइजर र बायोएनटेकले संयुक्त रूपमा विकास गरेको खोप पहिलो चरणमा बेलायतभरका ५० अस्पतालबाट दिन सुरु गरिएको हो ।
खोपको प्रभावकारिता बढेसँगै नेपाल सरकारले पनि परीक्षण पूर्ण रूपमा सफल हुनेबित्तिकै ल्याउने गरी तयारी तीव्र बनाएको छ ।
खोप ल्याउनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आठवटा समिति बनाएको छ । समितिहरूले खोपका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।
कुन देशमा बनेको खोप ल्याउने, ल्याएर भण्डारण कसरी गर्ने, कस्ता नागरिकलाई खोप दिनेलगायतका प्रविधिक विषयमा समितिहरूले काम गरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
ती अधिकारीका अनुसार प्राइभेट क्षेत्रलाई पनि खोपका लागि आह्वान गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘७२ पतिशतलाई दिने सरकारको योजना छ । २० प्रतिशत कोभ्याक्स कार्यक्रमबाट आउँछ अरू सरकारले नै खरिद गर्नुपर्छ’, ती अधिकारीले भने भने, ‘कोभ्याक्सबाट आउने खोपबाहेक अरू खोपका लागि प्राइभेट क्षेत्रलाई पनि आह्वान गर्न सकिन्छ ।’
कुन देशमा बनेको खोप ल्याउने भन्ने विषयमा प्रविधिक समितले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक डा. श्यामराज उप्रेतीले कोभ्याक्सबाट जुुन खोप आउँछ, त्यही खोपलाई खरिद गर्दा उपयुक्त हुने बताए ।
‘अहिले यो नै देशमा बनेको खोप खरिद गर्ने भन्ने छैन । तर, विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभ्याक्सबाट जुुन भ्याक्सिन सिफारिस गर्छ । हामीले पनि त्यही भ्याक्सिन ल्याउँदा राम्रो हुन्छ’, उनले भने ।
फाइजरको खोप सफल भयो भने नेपालमा भण्डारण गर्ने संरचना नै छैन । फाइजरको खोप माइनस ७० डिग्रीमा भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालसँग २ देखि ८ डिग्रीसम्मको मात्र भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता छ । ‘अरू सफल नभएर फाइजरको मात्र सफल भयो भने भण्डारण क्षमता थप गर्नुपर्छ । हामीसँग २ लेखि ८ डिग्रीसम्मको मात्र छ । यसका लागि केही थप गरे पुग्छ । माइनस २० डिग्रीका लागि थोरै छ । यसको पनि क्षमता थप्नुपर्छ । माइनस ७० डिग्रीको हो भने हामीसँग क्षमता नै छैन । पूरै थप गर्नुपर्छ’, खोप महाशाखा प्रमुख डा. गौतमले भने । नेपालले पनि भ्याक्सिन पाउने सल्लाहकार समितिका संयोजक डा. उप्रेती बताउँछन् ।
‘भ्याक्सिन धनी देशले पाउने, गरिबले नपाउने भन्ने हुँदैन । पहिलो चरणमा कोभ्याक्स कार्यक्रमबाट प्रत्येक देशका २० प्रतिशत जनताका लागि ६० लाख डोज आउँछ । यो ६० लाख डोज स्वास्थ्यकर्मी, सामाजिक क्षेत्रमा अग्रभागमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मी, ५५ वर्षमाथिका र दीर्घरोगीलाई प्रयोग गरिन्छ’, उनले भने । १२ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि भने भ्याक्सिन बनेको पनि छैन ।
नेपाल सरकारले ७२ प्रतिशतका लागि ४८ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । विभिन्न दातृ संस्थासँग सरकारले सहयोगका लागि पहल गरिरहेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै नागरिकलाई खोप लगाउन योजनावद्ध ढंगबाट काम गरिरहेको बताएको छ । ‘खोप आविष्कार भएको शुभसंकेत छ । सबै नागरिकलाई खोप लगाउने काम योजनावद्ध रूपमा गरिरहेका छौँ,' स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने, ‘खोपको उत्पादन व्यावसायिक र प्रयोग गर्ने अभियानमा संसारमा सुरु भएको छैन । सुरु हुँदा हामी सबैले पाउने सुनिश्चितता गरेको छ ।’
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २४, २०७७, १६:३८:००